နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများ 2021 လျှောက်လွှာ Portal ကိုများအတွက်ဓနသဟာယပညာသင်ဆု: လက်ရှိကျောင်းသတင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ဓနသဟာယပညာသင်ဆု 2021 လျှောက်လွှာ Portal
အတွက် Filed ပညာသင်ဆုများအပ်ဒိတ် by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန်လ 20, 2021 အပေါ်
ကြော်ငြာ။ JAMB CBT ဆော့ဝဲကိုယခုအခမဲ့ရယူပါ။
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်ဓနသဟာယပညာသင်ဆု - ဓနသဟာယနိုင်ငံတစ်ခု၏ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်အကျိုးရနိုင်မည့်ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းများရှိသည်။
ထို့ကြောင့်နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားအဖြစ် (က ဓနသဟာယ ဒီနိုင်ငံကနေအကျိုးရနိုင်တယ် ပညာသင်ဆု အရမ်း။ လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆို, ဤဆောင်းပါးသည်သူတို့ကိုသင်အချို့ကိုလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုပေါ်အချို့အရေးပါသောအသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။
၁။ Exeter ဓနသဟာယတက္ကသိုလ် Shared ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
Exeter တက္ကသိုလ်ကပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းမှုကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ယူကေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာန (DFID) နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ယူကေရှိဓနသဟာယပညာသင်ဆုကော်မရှင်နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျောင်းသားများအတွက် ဓနသဟာယ နိုင်ငံပေါင်း။
ပစ်မှတ်ထားသည့်အဆင့် / လေ့လာမှုနယ်ပယ်
Exeter တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆု ငါးဆုစုစုပေါင်းထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်။ အောက်ပါသင်တန်းများအနက်မည်သည့်ဘာသာရပ်တွင်မဆိုမဟာဘွဲ့ရရှိထားသောကျောင်းသားများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမဟာ (MPA) ။
ထို့အပြင် MSc စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း။
ဒါ့အပြင် MA ပြဇာတ်ရုံအလေ့အကျင့်။
ထို့အပြင် MSc ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူ့ကျန်းမာရေး။
ပညာသင်ဆု Worth: ဒါဟာကျူရှင်အခကြေးငွေ၏ 100% ဖုံးလွှမ်း။ ဒါ့အပြင်ဗြိတိန်သို့ပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖုံးလွှမ်း။ နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆုနှင့်အပိုဆောင်းစရိတ်။
အရည်အချင်းပြည့်မီ: လျှောက်ထားသူသည်နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားများဖြစ်ရမည် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ။ ဒါ့အပြင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ (ပညာသင်နှစ်) တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုမကလေ့လာခဲ့၊ နှင့်ဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲပြသရပေမည်။
Apply to: ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
၂။ Sheffield Hallam တက္ကသိုလ်မှဓနသဟာယမျှဝေသည့်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်
ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဓနသဟာယပညာသင်ဆု နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများကိုဤအစီအစဉ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ဤပညာသင်ဆုကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောကျောင်းသားများအားချီးမြှင့်မည်။ သို့သော်ကျောင်းသားများသည်ပညာရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကိုသရုပ်ပြရမည်
ဒီပညာသင်ဆုကိုလိုက်စားဘို့ရရှိနိုင်ပါသည် မာစတာရဲ့အစီအစဉ်ကို။ သို့သျောလညျး, အောက်ပါဒီပညာသင်ဆုဖုံးလွှမ်းလယ်ကွင်းများနှင့်အစီအစဉ်များအချို့ကို:
နိုင်ငံတကာ Hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်။
ထို့အပြင်မြို့ပြစီမံကိန်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအာဟာရ။ ထို့အပြင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရေး၊ ဒီဇိုင်း (ထုတ်ကုန်) နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု။
ပညာသင်ဆု Worth: ဒါဟာကျူရှင်အခကြေးငွေဖုံးသောတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အချိန်ပြည့်သင်ကြားပေးသောမာစတာသင်တန်းကာလအတွက်နေထိုင်ရန်နှင့်ခရီးသွားလာစရိတ်များပါ ၀ င်သည်။
လျှောက်ထားနိုင်ခွင့် ဓနသဟာယဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နေခြင်းသို့မဟုတ်လေ့လာခြင်းမပြုရ။ ဒါ့အပြင်ပထမ ဦး ဆုံးသို့မဟုတ်အထက်ဒုတိယလူတန်းစားအဆင့်မှာဖြစ်စေပထမ ဦး ဆုံးဒီဂရီကိုင်ထားရမည်ဖြစ်သည်
ဓနသဟာယအဝေးသင်သင်ယူပညာသင်ဆုများဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနှင့်အောက်ပိုင်းအလယ်ဝင်ငွေဓနသဟာယနိုင်ငံများထံမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသို့တစ်ခုဖြစ်သည် ဓနသဟာယပညာသင်ဆု နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်။ ထို့အပြင်ယူကေတက္ကသိုလ်များမှရွေးချယ်သောသင်တန်းများအားအဝေးမှသင်ယူခြင်းဖြင့်အချိန်ပိုင်း Master လေ့လာခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ဂမ်ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ ဂိုင်ယာနာနှင့်အိန္ဒိယတို့ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ လီဆိုသိုနှင့်မာလာဝီ။
ထို့အပြင်မိုဇမ်ဘစ်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်နှင့်ပါပူဝါနယူးဂီနီတို့ဖြစ်သည်။
Plus အား, ရဝမ်ဒါ, Sierra Leone, ဆော်လမွန်ကျွန်းစုနှင့်သီရိလင်္ကာ။
တန်ဇန်းနီးယား၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဗနူတူနှင့်ဇမ်ဘီယာတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်:ဤအချက်အလက်အတွက်အောက်ပါ application link ကိုသွားပါ။
ပညာသင်ဆု Worth: ဒါဟာအပြည့်အဝကျူရှင်အခကြေးငွေပေး။ ထို့အပြင်အဝေးမှသင်ယူခြင်းဖြင့် UK Master သင်တန်းကိုလေ့လာရန်အခြားမသင်မနေရကုန်ကျစရိတ်များ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်တန်း၏မည်သည့်လူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီ: နိုင်ငံသားများသည်သတ်မှတ်ထားသောဓနသဟာယနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်ဗြိတိသျှကာကွယ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဓနသဟာယနိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရမည်။ 2: 1 ၏ပထမဒီဂရီကိုကိုင်ထားရမည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပညာသင်ဆု ဘုံစည်းစိမ်ဥစ္စာပညာသင်ဆုအချို့ရှိပါသည်။ သူတို့မှာအများကြီးရှိပေမယ့်သူတို့အတွက်လျှောက်လွှာရက်စွဲကကုန်သွားပြီ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ, လိုအပ်ချက်များဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒါ့အပြင်သင်ဤဆောင်းပါးမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုဝေမျှပြောပြပါ။ သင်၏လူမှုမီဒီယာနေရာတွင်မျှဝေပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
ကပေးပို့တဲ့ TMLT နိုင်ဂျီးရီးယား
အွန်လိုင်းပေါ်မှစာဖတ်သူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀၀၀ ကျော်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
=> ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ Instagram | FaceBook & Twitter နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများအတွက်
=> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုလက်ျာ NOW ကအခုဆိုရင်
ads: ရုံ 60 ရက်အတွင်းခေါက် -DIABETES! - ဒီမှာကြိုတင်မှာယူပါ
မူပိုင်ခွင့်သတိပေး! ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိပါ ၀ င်သောအရာများကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအရာအားလုံးကို DMCA မှကာကွယ်ထားသည်။
ဒီဆိုဒ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့်တင်ထားသည်။ သင်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းခံရသည်ဟုယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]] တိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းရန်နှင့်အရေးယူမှုများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Lily ဆေးရုံလီမိတက်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 2020/2021 PDF List ကိုဒေါင်းလုပ်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ UTME မှမေးခွန်းများ ၂၀၂၁ နှင့်အဖြေများ PDF Download
NIFOR ရွေးချယ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 2021/2022 PDF List Download ကိုစစ်ဆေးပါ
Babcock တက္ကသိုလ် JUPEB / Pre- ဒီဂရီဝန်ခံချက်ပုံစံ 2020/2021 Session ကို update ကို
နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ကူနာပြည်နယ်၊ ချင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးအတွက်ဂျင်းထုတ်လုပ်မှုမှထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုကျား၊
Bingham တက္ကသိုလ်မှပို့စ် UTME / DE Form 2020/2021 ပြသခြင်း
www.naportal.com.ng နိုင်ဂျီးရီးယားကြည်းတပ် Portal ၏ ၀ င်ရောက်ရန်နှင့် 81RRI စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်ထားပါ
« JAMB CBT ပိုင်ရှင်များလိုအပ်ချက်များ 2021 နှင့်အရေးကြီးသောလမ်းညွှန်ချက်များ
Generation Google Scholarship 2021/2022 Application Update Portal »